IKiribati, iqoqo leziqhingi elinganyamalala ngaphambi kuka-2100 | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Isiqhingi saseKiribati, esisentshonalanga emaphakathi nePacific Ocean, enyakatho-mpumalanga ye-Australia, singanyamalala uma iqhwa lezigxobo liqhubeka lincibilika. Ulwandle, abathembele kulo kakhulu ukuze baphile, lungababangela izinkinga eziningi kusukela lapho iziqhingi eziyakha zingaphansi kwamamitha amabili ngaphezu kwezinga lamanzi alo.
Leli pharadesi elishisayo, lapho abantu abayi-110.470 behlala ndawonye, ingacwiliswa ngaphambi kokuphela kwekhulu, ngaphandle uma kuthathwa izinyathelo zokuyivimbela.
Futhi yilokho kanye abanethemba lokukwenza. Futhi ngeke bakwenze bodwa, kepha bazothola usizo lweqembu lonjiniyela abavela e-United Arab Emirates, abamise kuleliya lizwe isiqhingi esikhulu sokuzenzela emhlabeni esibizwa ngePalm Islands. Njengoba bachaza, Kwakudingeka bafune amasu okuzivumelanisa nezimo ngaphandle kokufuduka, baphakamise inhlabathi yaseKiribati, ngoba isiqhingi sokuzenzela sasingeke sikwazi ukumelana namagagasi aphakeme noma izivunguvungu.
Le phrojekthi inesabelomali esilinganisiwe sama-dollar ayizigidi eziyi-100 futhi ibekwe njenge- »isixazululo sokudala». Ukwenza lokhu, babezosebenzisa umhlaba okwebiwe amachibi angaphakathi. Noma, okwamanje, izinkinga eKiribati ziyaqhubeka.
Izikhukhula zivame kakhulu, ngoba imisele ayisasekeli umthelela wamaza. Ukuncibilika kwezigxobo kuyisongo kubo bonke labo abahlala eduze nolwandle, njengezakhamizi zaseKiribati, uhulumeni wazo wathenga isiqhingi saseFijian uVanua Levu njengoba kubikwe yiThe Guardian, noma ifunda inketho yokuhambisa abantu ngaphezulu kwepulatifomu enkulu entantayo.
Ukufudumala kwembulunga yonke esibhekene nakho kuvivinya ukuzivumelanisa kwethu nezimo. Kepha, Bekungeke yini kube ngcono ukuthatha izinyathelo zokukuvimba? Amazwe amaningi asigunyazile Isivumelwano Sezulu SaseParis, kodwa… kusazobonwa ukuthi ngabe izinyathelo ezidingekayo zizothathwa ngempela yini ukusiphikisa. Ngaphandle kwalokho, amazwe amaningi azocwiliswa.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » IKiribati, iziqhingi ezinganyamalala ngaphambi kuka-2100
Izimpiko ezinkulu ngenxa yokuguquka kwesimo sezulu